IiNkonzo zoGuqulo zoMzantsi Afrika
Siyakwamkela kwinkampani yoguqulo yobugcisa beeNgcali yoMzantsi Afrika. Sizibophelele ekuveliseni kwakhona isiqulatho soshishino, somthetho, nesonyango esichanekileyo ngeelwimi ezili-11 ezisemthethweni zoMzantsi Afrika. Sikwanika iinkonzo zoguqulo kumaqabane orhwebo angundoqo oMzantsi Afrika, ngeelwimi ezifana neSiphuthukezi, iSipanishi, isiJamani kunye neMandarini yaseTshayina. Bonke abaguquli bethu baqinisekisiwe ukuba bahlangabezane nemigangatho yoguqulo yobugcisa behlabathi.
Bona umgangatho woguqulo lwethu usebenza. IsiNgesi kunye namaphepha aguquliweyo ziyafana. Uguqulo lwethu lufikeleleka ngokupheleleyo kwaye alunazo iimpazamo zopelo.
Tyelela isayithi yethu ngalo naluphi ulwimi loMzantsi Afrika:
Umgangatho: Sichana nje kwixesha lokuqala
Sisebenzisa ngokukhethekileyo abaguquli abaziingcali. Xa siguqula uxwebhu lomthetho, sisebenza kuphela nomguquli oqinisekisiweyo, othetha ulwimi olo lwenkobe. Ubuncinane beemfuneko zethu zokufunda sisiqinisekiso esivela kwiyunivesiti evunyiweyo yoMzantsi Afrika. Ukongeza, bonke abaguquli bethu banobuncinane bamava eminyaka eli-10 yokusebenza okukwinqanaba eliphezulu. Sisoloko sikonwabela ukukunika ii-CV kunye neziqinisekiso kunye nokusayina ii-SLA siqinisekisa umgangatho woguqulo lwethu.
Ukhangelo lopelo lwamagama lwe-MS Word
Amaxwebhu akho aguquliweyo ahlelwa ngendlela obuwuhlele ngayo umbhalo wakho wesiNgesi. Sisebenzisa iikhompyutha ukuqinisekisa ukuba amaxwebhu akho awanazo iimpazamo zopelo, sisebenzise ulwimi lwala maxesha kwaye kusetyenzwa ngawo ngokungatshintshiyo. Siyakuvuyela ukukubonisa.
Imihla elindeleke ukuba ingeniswe ngayo imisebenzi
Ishishini elinempumelelo lithembele kuqinisekiso. Ishishini lethu silakhele ukuba lisoloko lihlangabezana nokulindelwe ziiklayenti zethu. Ngeke sizibophelele kumhla ekulindeleke ukuba angene ngawo amaxwebhu ongeke bangahlangabezani nawo abaguquli bethu.
Sithumelele uxwebhu lwakho ngeimeyile, ukhombisa imihla ekulindeleke ukuba uhlangabezane nayo kunye neelwimi zakho. Asinakuthatha ngaphezulu kwemizuzu emihlanu ukuphendula kwizicelo zentelekelelo yamaxabiso ngexa leeyure zokusebenza.
Iilwimi ezithethwa kumaphondo oMzantsi Afrika*